DHEGEYSO-Doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo dib u dhacday mar kale. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo dib u dhacday mar kale.
Noofember 25, 2016 10:42 g 0
Muqdisho, Nov 26 2016-Wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Micheal Keating ayaa sheegay in dibudhac kuyimid doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya.
Danjire Keating oo waraysi siinayey barnaamijka Focus on Africa ee BBC, ayaa sheegay ka hor doorashooyinka labada afhayeen, in loo baahan yahay in la soo doorto tirada ugu badan ee Xildhibaanada Aqalka Hoose.
DHEGEYSO-Xukuumadda iyo culimada Puntland oo baaq si wadajir ah usoo saaray.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo ammaanay maamulka Jubbaland.